Sidee dib loogu magacdabaa meheraddaada adigoon waayin taraafikada | Martech Zone
Shirkado badan maahan wax walba oo ay ku ogaadaan xilliga ay bilaabayaan boggooda. Taas bedelkeeda, ku dhowaad 50% ganacsiyada yaryar xitaa ma laha degel internet, iskaba daa sawir sumadeed oo ay doonayaan inay horumariyaan. Warka fiicani maahan inaad u baahan tahay inaad si wada jir ah wax uga ogaatid fiidmeerta. Markaad bilawdo bilowga, waxa ugu muhiimsan ayaa si hufan u ah - in la bilaabo. Waxaad had iyo jeer haysataa wakhti aad ku samayso isbeddello iyo magac cusub. Aniga oo ah CMO ka ah Domain.ME, hawl wadeen magacyada shaqsiyaadka .ME domain, waxaan markhaati ka ahay mashaariic dib u cusbooneysiin yar iyo weynba maalin kasta.
Sababaha ka dambeeya mashaariicdan way kala duwan yihiin. Dadka qaarkiis si fudud ayaa loogu qasbay inay ku beddelaan magaca magacooda ku biirista, ama waxaa laga yaabaa inay wax ku leedahay sawirka hadda jira, shirkadaha qaarkoodna waxay rabaan inay tijaabiyaan!
Si kasta oo ay sababtu tahay, hal shay ayaa hubaal ah - waxaad dooneysaa inaad meheraddaada ku sii dhex mariso magac u sameynta. Laakiin sidee uga ilaalin kartaa macaamiishaada joogtada ah inay albaabka ka soo galaan markaad beddesho calaamadda, magaca, midabka, iyo wax kasta oo ay ku baran lahaayeen?
Waxay fure u tahay inaad macaamiishaada ka dhigto qayb ka mid ah magac-bixintaada. Hawlgelinta iyo jawaab celinta joogtada ah ee dhagaystayaashaada ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee ku-meelgaarka guusha. Fikrad ahaan, udiyaariyaashaada ugu daacadsan waxay u adeegi doonaan koox tijaabo ah muuqaalkaaga cusub. Dhageyso iyaga, samee cod bixin haddii aad aaminsan tahay inaad heli karto xoogaa jawaab celin ah, oo u oggolow inay run ahaantii qayb ka noqdaan ganacsigaaga. Dadku way ku qanacsan yihiin ku lug lahaanshaha waxayna xitaa u badan tahay inay kugula taliyaan una doodaan magacaaga haddii ay dareemaan inay kaa caawiyeen inaad ku dhisto meesha ugu horeysa.
Ka warran degelkeyga?
Haysashada taraafikadaada iyo darajooyinkaaga adag ee la kasbaday ee habka dib u habeynta iyo bedelida magacaaga domain xaqiiqdii wey adkaan doontaa. U diyaari naftaada xaqiiqda ah inaad dhab ahaantii waayi doontid qaar ka mid ah booqdayaasha (iyo iibka qaar sidoo kale) hawshan darteed. Si kastaba ha noqotee, natiijada ugu dambeysa ayaa laga yaabaa inay ka dhigto wax walba inay u qalanto oo kala guur si fiican looga fikiray ayaa yareyn kara dhaawaca. Shantan sharuuc ayaa kugu bilaabi doona:
Ogow ilaha taraafikadaada - Waxaad u baahan doontaa dulmar guud oo faahfaahsan oo ku saabsan halka taraafikadaadu hadda ka imaanayso (macluumaadkan si fudud ayaa looga heli karaa iyada oo loo marayo Qalabkaaga Google Analytics). Fiiro gaar ah u yeelo kanaalada keenaya xaddiga ugu badan ee taraafikada - oo gebi ahaanba hubi in dhagaystayaashooda ay ku wargeliyaan dib u habeynta iyo isbeddelka bogga. Waqti qaado si aad u horumariso istiraatiijiyad bartilmaameed u noqon doonta kanaallahan gaarka ah kuna wargalinta isbeddelka si dhakhso leh oo wax ku ool ah.
Ku hayso martida isla bogga - Weligaa ma maqashay dib u habeynta 301? Kuwani booqdayaasha degelku waxay u wareegaan URL ka duwan kan ay markii hore ku soo galeen biraawsarkooda ama waxay ka riixeen liiska natiijooyinka raadinta. Tani waxay kaa caawineysaa inaad hubiso in macaamiishaada oo aan markii hore ka warqabin dib-u-habeyntaada iyo beddelka domain ay ku kaxeynayaan bartaada cusub. Ka dib markaad soosaarto warbixin gadaal ah oo aad sameysid meelaha ay ka hadlayaan boggaaga, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in dhammaan URL-yadaas ay tilmaamayaan cinwaankaaga cusub. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku kireysato xirfadle talaabadan.
Jiido fur-ka - Ka dib markaad wax walba hubisay laba jeer oo dhagaystayaashaada si habboon loogu wargaliyay ku-meelgaarka, tallaabada xigta waa inaad bilowdo websaydhkaaga cusub. Waqtigan xaadirka ah, waxaad u baahan doontaa inaad haysato koontadaada Google Analytics iyo Raadintaada Console ee ku xiran boggaaga cusub. (Fiiri Douglas's liiska hubinta isbedelka halkan!) Kaliya intaas maahan, laakiin waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad ku sii haysato astaanta duugga ah ee astaamaha 'meta' iyo nuqullada qoraalka ee hantidaada cusub si matoorada raadinta ay u ogaan karaan una muujinayaan isbeddelka si sax ah.
Cusbooneysii xiriiriyeyaashaada & liisaskaaga - Dhamaan cinwaanada ganacsiga ee ka muuqda boggaaga waxay u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo - iyo haddii aad maalgashatay SEO-ga maxalliga ah oo aad leedahay boqolaal xiriiriyeyaal ah oo ku saabsan cinwaanada ganacsiga ee internetka oo dhan, waxay noqon doontaa waqti-qaadasho. Backlinks, sida kuwa ku qoran buuggaagta ganacsiga, ayaa ah tilmaamayaasha qiimahaaga iyo joogitaankaaga shabakadda. La xiriir boggaga internetka ee kugula xiriiray adiga wakhtigii hore oo weydii iyaga inay u beddelaan xiriiriyahooda cinwaankaaga cusub si aad u sii wado inaad si fiican u qabato natiijooyinka mashiinka raadinta.
Kor u qaad, kor u qaad, kor u qaad - Ka faaideyso PR, dhajinta martida, ogeysiisyada emaylka, PPC iyo dhammaan kanaalkaaga suuq-geynta dijitaalka ah si aad dadka ugu ogeysiiso inaad halkaas ku sugan tahay muuqaal cusub iyo domain. Kharashaadkani xitaa wuu kugu guuleysan karaa qaar ka mid ah hagaha cusub, waana hubaal inay kaa caawin doonto makiinadaha raadinta inay muujiyaan macluumaadkaaga oo ay si habboon u xareeyaan isbeddelkaaga. Mashruuc dib-u-habeyn ah oo aan lahayn olole suuq-geyn ayaa si fudud u ah qashin, markaa ku xisaabso maalgelintaas sidoo kale.
Isbeddelku waa iska caadi ganacsiga adduunka ee shirkadaha cusub iyo kuwa la aasaasayba. Ogaanshaha sida loo noolaado oo loo kobciyo isbeddeladaas waa muhiim, markaa dadaal dheeri ah samee si aad ugu soo bandhigto meheraddaada iftiinka ugu fiican.
Tags: beddelka domainliiska hubinta beddelka domainmagac bixinmagac badalka